जनप्रतिनिधिलाई जस–अपजस - Khula Patra
Thursday, May 13, 2021	| बिहिबार, बैशाख ३०, २०७८
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत्र ०८, २०७५
प्रकाशित समय: २१:४७:१७
तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकालले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ अनुरुप नगर शिक्षा ऐन जारी गर्‍यो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र शिक्षकहरूले ऐन बदरको माग गरेर उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरे । न्यायाधीश श्रीमणकुमार गौतम र बबिता उप्रेतीको संयुक्त इजलाशले संघीयताको मर्मलाई संरक्षण गर्दै उक्त रिट गत पुस १२ गते खारेज गरिदिएपछि बल्ल ऐन कार्यान्वयनमा लैजान पायौं ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले काम गर्ने सिलसिलामा के कस्तो उल्झन सामना गर्नुपरिरहेको छ भन्ने यो एउटा दृष्टान्त हो । राज्य पुनःसंरचना भएर स्थानीय तह अस्तित्वमा आएपछि पहिलोपटक बहाल हुने जनप्रतिनिधि हामी थियौं । हामीले लगभग शून्यको अवस्थाबाट काम सुरु गर्नुपरेको थियो । कानुन, नियम, भौतिक पूर्वाधार लगायतका संरचना तयार गर्दै स्थानीय तह सञ्चालन गर्नुपर्ने परिस्थिति थियो ।
संविधानले तोकेका साझा अधिकार सूची अन्तर्गतका कानुन संघ र प्रदेशले बेलैमा बनाइदिएनन्, संक्रमणकालीन समयमा न केन्द्रबाट समयमै निर्देशिका प्राप्त भयो । यसले केही समय अलमल पैदा गर्‍यो । अर्कोतिर जनआकांक्षा उच्च थियो । संविधानले स्थानीय सरकारलाई आधारभूत र माध्यमिक तहको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिएको छ । लालीगुराँस नगरपालिकाले शिक्षालाई प्रविधि र अर्थोपार्जनसँग जोड्ने गरी नगर शिक्षा ऐन तयार गरेको थियो । यसमा शिक्षक, कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, विद्यालय गाभ्नेदेखि लिएर विद्यालय व्यवस्थापन, नियमन, अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रायः स्कुलमा प्रवीणता प्रमाणपत्र, स्नातक तह योग्यता भएका स्थायी शिक्षकको मातहतमा स्नातकोत्तर गरेका शिक्षक काम गरिरहेका छन् । पुराना स्थायी शिक्षकहरू कम्प्युटर चलाउनसमेत जान्दैनन् । नगर ऐनले स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अस्थायी शिक्षक पनि प्रधानाध्यापक हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले एकथरी असन्तुष्ट बनेका छन् ।
गाउँघरको स्कुलमा विद्यार्थी छैनन् । विद्यालय अर्को स्कुलमा गाभिनबाट बचाउन विद्यार्थीको तानातान हुन्छ । विद्यार्थी बजारका निजी स्कुलमा जान्छन् । गाउँका शिक्षकले नै बोर्डिङ स्कुल खोलेका छन् । तलब गाउँको स्कुलबाट खाएर नाफा बजारको बोर्डिङबाट लिएर शिक्षकले नै शिक्षाको व्यापार चलाइरहेका छन् ।
बोर्डिङका शिक्षकको तलब ५ हजार रुपैयाँबाट सुरु हुन्छ, गाउँका शिक्षकको तलब २३ हजार रुपैयाँबाट । पढाइ भने बोर्डिङकै राम्रो ठानिन्छ । आफ्ना बालबच्चालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउन अभिभावक खाडी मुलुक र मलेसियामा छन् । सार्वजनिक विद्यालयमा शैक्षिक स्तर जसरी पनि सुधार गर्नुछ । त्यसैले हामीले नगर शिक्षा ऐन प्राथमिकता दिएर तयार गरेका थियौं ।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा संघको उदासीनता उदेकलाग्दो छ । उपसचिव स्तरको एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर, वडामा सब–इन्जिनियरसहित कृषि, पशु र कार्यालय सहयोगी लगायत ४७ जना कर्मचारी तोकिएका छन् । लालीगुराँसमा वडा सचिवहरूदेखि बाहेक नगरपालिकामा एक उपसचिव, एक लेखापाल र दुईजना ओभरसियर र केही कार्यालय सहयोगीमात्र कार्यरत छन् ।
पहिले स्थानीय स्वायत्त ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ ले साबिक जिविस, नगरपालिका र गाविसलाई अधिकारसम्पन्न बनाए पनि कर्मचारीहरूले जनप्रतिनिधि मातहतमा रहेर काम गर्न मानेनन् । अहिले पनि त्यही भइरहेको छ । उपसचिव स्तरका कर्मचारीहरूमध्ये स्थानीय तहमा चार जनाले मात्र समायोजन हुन चाहे, त्यो पनि काठमाडौंजस्ता महानगरपालिकामा ।
हामीले कक्षा ८ को नगरस्तरीय परीक्षा सञ्चालन गर्‍यौं । मार्कसिटमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सही गर्न मानेनन् । विद्यार्थीको मार्कसिटमा जनप्रतिनिधिले सही गर्नुपर्ने भयो । कर्मचारीहरू जनप्रतिनिधिको मातहतमा बस्न नमानेरै संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न भएको छ । कर्मचारीले संघीयता आत्मसात् गर्नसकेका छैनन् । कानुनले कर्मचारीलाई खर्च लेख्ने काममात्र दिएको छ ।
कर्मचारीकै अभावमा घर–जग्गा, नक्सा, घरेलु, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापनजस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सेवा सरकारले दिनसकेको छैन । स्थानीय तहमा तोकिएजति प्राविधिक सहितका कर्मचारी उपलब्ध हुने हो भने प्रदेश सरकार मातहत डिभिजन खडा गरिरहनु पर्दैन ।
केन्द्र सरकारले आफैं काम नगर्दा वा स्थानीय तहमा समन्वय नगर्दा स्थानीय तहले अपजस खेप्नुपर्छ । दसवटा नमुना सहर बनाउने योजनामा लालीगुराँसको बसन्तपुर (साबिक गाविस) पनि पर्छ । सरकारले नमुना सहर निर्माणका भौतिक पूर्वाधारका लागि लालीगुराँस नगरपालिकाको टुटे–डोप्किले खण्डमा करिब ५ सय रोपनी जग्गाको कित्ताकाट रोकेर डीपीआर बनाएको छ । केन्द्र सरकारले काम भने अगाडि बढाएको छैन । यसले जग्गाधनी मर्कामा परेका छन् ।
सडक सार्वजनिक ऐन–२०३१ अनुसार राष्ट्रिय गौरवका सडकमा सडकको क्षेत्राधिकार बीच भागदेखि दायाँ–बायाँ ३१–३१ मिटरसम्म हुने व्यवस्था छ । लालीगुराँस नगरपालिकामा करिब २० किमिसम्म मध्यपहाडी लोकमार्ग पर्छ । ६२ मिटरभित्र पर्ने घरजग्गा अचल छ । कारोबार हुँदैन । मौजुदा बाटो सरकारले मर्मत–सम्भारसम्म गर्नसकेको छैन ।
सरकारले त्यत्रो फराकिलो बाटो पनि बनाउँदैन । सरकारले हालै मध्यपहाडी लोकमार्गको वसन्तपुर–म्याङलुङ खण्डको टेन्डर आह्वान गर्दा दुई लेन अर्थात ७ मिटरमात्र बाटो चौडा गर्ने भनेको छ । एकातिर बाटो बनाउन नसक्ने र अर्कातिर घरजग्गा पनि अचलै रहँदा नगरबासीले घरजग्गा पास गर्न पाएका छैनन् । यसले नगरको राजस्व पनि प्रभावित छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयता कार्यान्वयन गर्दै समावेशी, जवाफदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी अनुभूति जनतालाई दिलाउने दायित्व स्थानीय सरकारलाई छ । संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची छ । सरकारहरूबीच समन्वय अति आवश्यक देखिन्छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास कोषको योजना छनोट गर्ने कार्यविधिले संघीयताको मर्म उल्लंघन गरेको छ । सांसदहरूको दायित्व नीति तथा कार्यक्रम र कानुन बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने हो ।
गएको भदौ १ देखि मुलुकी संहिता लागू भयो । संहिताले विभिन्न जातजातिका प्रथागत कानुनलाई समेट्न नसक्दा कानुनी मेलमिलापमा समस्या भएको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारहरू एक वर्षको अवधिमा प्राप्त अनुभवका आधारमा आपसीसमन्वय र सहकार्य गर्दै अघि बढेमात्र जनआकांक्षा सम्बोधन हुनसक्छ ।
लेखक लालीगुराँस नगरपालिका, तेह्रथुमका मेयर हुन् ।
ओलीलाई पदमुक्त गर्न सांसदबाट राजिनामा : रावल
मातातीर्थ : कसले सम्झिदिने ती ‘महान् शहिद’ जन्माउने आमाहरुलाई ?
७१ जिल्लामा निषेधाज्ञा, कुन-कुन जिल्लामा कहिलेसम्म
ओलीले गुमाए विश्वासको मत, पक्षमा ९३, विपक्षमा १२४ मत खस्यो
कोभिड संक्रमितका लागि अक्सिजन सिलिण्डर खोज्दै भक्तपुर प्रहरी
अमरगढीका यी मेयर: जसले आफुले चढ्ने गाडीलाई एम्बुलेन्स बनाए
कोरोनाका कारण ७३ जिल्लामा निषेधाज्ञा
जसपा बैठक : बहुमतको सरकारबारे जुटेनँ सहमति
सरकारले अक्सिजनको आपूर्ति रोकेपछि बिरामीलाई डिस्चार्ज गर्नुपर्ने अवस्था आयो : केएमसी अस्पताल
शीतल निवास पुगेर ठाकुर र महतोको आग्रह, ‘​उपेन्द्र आए वैधता नदिनू’
आफ्नै नेतृत्वमा ‘अर्ली इलेक्सन’ चाहान्छन् ओली
‘ग्रेटर टुँडिखेल’ : रानीपोखरीदेखि रंगशालासम्म यसरी बन्दैछ विशाल उद्यान
पत्रकारलाई ‘प्रण्टलाइनर’ घोषणा गरी निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न माग (निर्णयहरुसहित)
दैनिक पाँच हजार अक्सिजन सिलिण्डर अपुग, एउटै संक्रमितलाई चाहिन्छ पाँच सिलिण्डर
निर्वाचन आयोगको अभिलेख, ‘जसपाको पहिलो अध्यक्ष महन्थ, दोश्रो उपेन्द्र’
डब्लूएचओले भन्यो, ‘कोरोना संक्रमितले ‘आइवरमेक्टिन्’ औषधीको स‍ेवन नगर्नु’
फेसबुक, ट्विटरबाट प्रतिबन्धित ट्रम्पले खोले आफ्नै ‘सामाजिक सञ्जाल’
वर्तमान र पूर्वप्रधानमन्त्री बाहेकको राष्ट्रिय सरकार बनाऔं : डा. बाबुराम भट्टराई
कोरोनाका कारण एमाले नेता पशुपति चौलागाईंको निधन
काठमाडौंँका सबै सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाइने
काठमाडौँ उपत्यकामा जेठ १३ गतेसम्म निषेधाज्ञा, के-के नियम परिवर्तन भए? (विज्ञप्तिसहित)
सामाजिक न्याय र समानताका लागि दलित संघ अध्यक्षले गरे एकल दौड
ट्रयाक खुलेको तीन दशकपछि ग्राभेल हुदैछ सिधुवा–शुक्रबारे सडक (तस्विरसहित)
नेपाली फिल्ममा सक्रिय बन्दै प्रेम बस्याल
तेह्रथुमको जिरिखिम्तीमा ल्याण्डरोभर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु
एमालेको सत्ता कब्जाको उदेश्य कांग्रेसलाई स्वीकार्य छैन : डा.शेखर कोइराला
लकडाउनमै सुटुक्क बिहे गरेर अमेरिका उडिन् मोडल रश्मी तामाङ
ओली सरकारको पतन सुरु भयो : प्रकाशमान सिंह
पथरीले जित्यो प्रथम सुन्दरहरैंचा मेयर कप फुटबल प्रतियोगिता
राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले माग्यो डेढ करोड